भारतीय हस्तक्षेपका विरूद्ध बहादुरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ: पत्रकार योगी – Karnalisandesh
भारतीय हस्तक्षेपका विरूद्ध बहादुरी प्रदर्शन गर्नुपर्छ: पत्रकार योगी
प्रकाशित मितिः १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:४४ November 29, 2019
काठमाडौँ। वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगीले बैदेशिक थिचोमिचोका विरूद्ध एक पटक पुनःनेपालीले बहादुरी प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिमतलाई मुखरित गरेका पत्रकार योगीले अनावश्यक बैदेशिक हस्तक्षेप नेपालीको लागि मान्ने नहुने स्पष्ट पारे।
लामो समयदेखि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाप्रति आवाज बुलन्ध गर्दै आएका पत्रकार योगीले राणा शासन अन्त्यका लागि २००७ सालमा राजा त्रिभुवन र राजनीतिक दलका नेताहररूले मागेको सहयोगको जगमा टेकेर भारतले आजका दिनसम्म हस्तक्षेप कायम राखेको स्मरण गराएका छन्।
त्यस्तै पत्रकार योगीले २०४६ सालमा राजा र नेताहरूले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा माओवादी विद्रोह गराउनका लागि भारतले खेलेको भूमिका के ठिक थियो ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन्।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले ‘नेपाली राजनीतिकर्मी सस्तो लोकप्रियता र आन्तरिक खपतका लागि राष्ट्रियतालाई उचाल्ने गर्छन्। पछिल्लो समयको भारतविरूद्धको मुर्खता महंगो पर्नसक्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेदप्रकट गर्दै पत्रकार योगीले सोझै अस्वीकार गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा जथाभाबी खेल्ने र हाम्रो देशलाई कमजोर बनाउने अपराधको नेपालीले बिरोध गर्दा महंगो हुन् सक्छ भनेर के आधारमा धम्की दिने ? हाम्रो देशको पक्षमा बोल्दा हाम्रो मुर्खता कसरी हुन्छ ? धम्की दिएकै हो भने नेपाली जनताले एक पटक फेरी बहादुरी प्रदशन गर्नेछन् ढुक्क भए हुन्छ।’